Admin – Taung Gyi Media
Taung Gyi Media
ကစားသမား အပြောင်း အရွှေ့များ နှင့် နောက်ဆုံး ရ ယူနိုက်တက်သတင်းတိုများ
Unicode ကစားသမား အပြောင်း အရွှေ့များ နှင့် နောက်ဆုံး ရ ယူနိုက်တက်သတင်းတိုများ ပေါ့ဘာ ဟာ ဂျူဗင်တပ် အသင်းကို ပြောင်းဖို့ ရန် သဘောတူညီ မှု ရရှိသွားပီဟု သိရပါတယ်။ သုံးနှစ်စာချုပ်ဖြစ် ပြီး လုပ်ခလစာ တစ်နှစ်ကို ယူရို ၁၀ သန်း၀န်းကျင်ခန့် + အပိုဆုကြေး ရရှိမယ်လို့ လည်း သိရပါတယ်။ ယူနိုက်တက် နည်းပြ တန်းဟတ် ဟာ အသင်းရဲ့ လူငယ် နောက် ခံလူ ဘရန်ဒန် ဝီလီယံ ဟာအသင်းရဲ့ အနာဂတ် မှာ မပါဟုဆိုကာ ထွက်ခွာလိုပါက ထွက်ခွာနိုင် ရန် ကမ်းလှမ်းမှု များ ကို လက်ခံစေ ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဝီလီယံ ဟာ […]
နူးနက်စ်အစား ခေါ်ဖို့ တန်းဟတ်ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ တိုက်စစ်မှုး သုံး ဦးစာရင်းထွက်ပေါ် လာ
Unicode နူးနက်စ်အစား ခေါ်ဖို့ တန်းဟတ်ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ တိုက်စစ်မှုး သုံး ဦးစာရင်းထွက်ပေါ် လာ တန်းဟတ်ကတော့ ချန်ပီယံလိဂ် မကန်ခြင်လို့ ယူနိုက်တက်ကို ငြင်းပါယ်ခဲ့ သူ နူးနက်စ်ကို ခေါ်ယူဖို့ ရန် မကြိုးစားတော့ ပဲ ၎င်း အစား ခေါ်ယူပေးရမယ့် တိုက်စစ် မှုး စာရင်းကို ယူနိုက်တက် တာဝန်ရှိသူများထံ ပေးပို့ ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ တစ်- ဂျော်နသန်ဒေးဗစ့် – အသက် 22 နှစ် အရွယ် အဆိုပါ လိုင်လီ တိုက်စစ်မှုး ဟာ အဲရစ်တန်းဟတ် ဟိုးအ ရင် ထဲ က သတိထား စောင့် ကြည့် ဖူးသူ တစ်ဦး ဖြစ်တယ်လို့ သိရပြီး […]
ပထမဆုံးကစားသမား သစ် ခေါ်ယူမှုပြုလုပ်နိုင် ခဲ့ ပြီဖြစ်တဲ့ တန်းဟတ် နဲ့ ယူနိုက်တက်
Unicode ပထမဆုံးကစားသမား သစ် ခေါ်ယူမှုပြုလုပ်နိုင် ခဲ့ ပြီဖြစ်တဲ့ တန်းဟတ် ယူနိုက်တက် ဟာ အေဂျက် နောက်ခံ လူ တင်ဘာကို ခေါ်ယူ နိုင် လိုက်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ‌တင်ဘာ ရဲ့ အေးဂျင့် ဖြစ်သူ က ၎င်းရဲ့ ဆိုလ်ရှယ် မီဒီယာ မှာ သဘောတူညီ မှု ရရှိခဲ့ ပြီ ဖြစ်ကြောင်း တင်သွားခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ယူနိုက်တက် ဟာ ကစားသမား နဲ့ သဘောတူ ညီ မှု ရရှိခဲ့တာ ဖြစိပြီး မကြာခင် အေဂျက် အသင်း နဲ့ သဘောတူ ညီ မှု ရရှိနိုင် တော့ မယ်လို့ လည်း သိရပါတယ်။ တင်ဘာ အတွက် […]
ရောင်းချခံရတော့မယ့် အကယ်ဒမီထွက် 3ဦး နဲ့ နောက်ဆုံး ရ ယူနိုက်တက် သတင်းတိုများ
Unicode Unicode ရောင်းချခံရတော့မယ့် အကယ်ဒမီထွက် 3ဦး နဲ့ နောက်ဆုံး ရ ယူနိုက်တက် သတင်းတိုများ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ ဂိုး သမား ဖြစ်သူ ဟန်ဒါဆန် ဟာ နယူးကာဆယ် အသင်း ကို ပြောင်း ရွှေ့ဖို့ ရန် အတွက် ၉၉% သေချာ သွားပြီလို့ သိရပါတယ်။ ပြောင်း ရွှေ့ကြေး အားဖြင့် ပေါင် သန်း ၃၀ ခန့်ဖြစ်တယ်လို့ လည်း သတင်းများ အရ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နော်တင်ဟမ် ဖောရက်စ် နဲ့ ခြေစွမ်းပြနေသူ ဂျိမ်းဂါနာဟာလည်း ဖောရက် အသင်းသာ ပရီးမီးယားလိဂ်သို့တန်းတက်လာပါက ထပ်မံအငှါး ချ ခံရမယ်လို့ သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် ဂါနာကို လိဒ် အသင်းကလည်း […]
ယူနိုက်တက်နဲ့ လီ၀န်ဒေါစကီး ကြားက အပြောင်အရွှေ့ဆွေးနွေးမှုနောက်ဆုံးအခြေအနေ
Unicode ယူနိုက်တက်နဲ့ လီ၀န်ဒေါစကီး ကြားက အပြောင်အရွှေ့ဆွေးနွေးမှုနောက်ဆုံးအခြေအနေထွက်ပေါ် 90min သတင်းထောက် တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဂါရယ်မီ က တော့ ဘိုင်ယန် အသင်း ရဲ့ အသက် ၃၄ နှစ် အရွယ် တိုက်စစ် မှုး ဟာ ယခု နှစ် မှာ ဘိုင်ယန် အသင်း ကနေထွက် ခွာ မည် ဖြစ်ပြီး အဓိက အား ဖြင့် ဘာစီလို နာ အသင်း ကို ပြောင်းဖို့ ဆွေးနွေး နေတယ်လို့ ဆိုသွားခဲ့ ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လီ၀န်ဒေါစကီးရဲ့ အေးဂျင့် ဖြစ်သူ ဇယာဗီ က ၎င်းရဲ့ ကစားသမား အတွက် ဘာစီလို နာ အသင်း […]
တင်ဘာအတွက်ယူနိုက်တက်ကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး သတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ အေဂျက်
Unicode တင်ဘာအတွက်ယူနိုက်တက်ကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး သတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ အေဂျက် ယူနိုက်တက် အသင်း ကတော့ အသက် ၂၀ အရွယ်အေဂျက် အသင်း ရဲ့ နောက် ခံ လူ တင်ဘာကို ခေါ်ယူနိုင် ဖို့ ရန် အေဂျက် အသင်းတာ၀န်ရှိသူတွေနဲ့ ဆွေးနွေး နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဂျူလီယန် တင်ဘာ ဟာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ဒီရာသီ အဓိက ပစ်မှတ် တွေထဲ က တစ်ခု ဖြစ်ပေမယ့် လို့ ယခု အချိန်မှာ တော့ သတင်း သိပ် မထွက် သေး တာကို တွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိ အခါမှာတော့ တင်ဘာကို ဘိုင်ယန် မြူးနစ် အသင်း က ခေါ်ယူ ဖို့ […]
ရောက်ဖို့သေချာသွားတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့သတင်းနဲ့ နောက်ဆုံးရ ယူနိုက်တက်သတင်းတိုများ
Unicode ရောက်ဖို့သေချာသွားတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့သတင်းနဲ့ နောက်ဆုံးရ ယူနိုက်တက်သတင်းတိုများ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ အေဂျက် နောက်ခံ လူ ဂျူလီယန် တင်ဘာကို ခေါ်ယူနိုင် ဖို့ ရန် 99% သေချာ ခဲ့ပီလို့ ဆိုရပါမယ်။ ဘာကြောင့် ဆို အဆိုပါ အသက် 20 အရွယ် နောက်ခံ လူ တင်ဘာ ဟာ မနေ့က ပဲ ဘိုင်ယန် မြူးနစ် အသင်း ရဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု ကို ငြင်းပါယ် ခဲ့ တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အကြောင်း ပြချက်က တော့ ၎င်းရဲ့ ဆရာဖြစ်သူ တန်းဟတ် နဲ့ မန်ချက်စတာ မှာ သွားရောက် ကစားရန် ဆုံးဖြတ် ထားတာကြောင့် […]
ယူနိုက်တက်ကို ပြောင်းချင်လွန်းလို့ဘိုင်ယန်ကိုငြင်းပါယ်ခဲ့တဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ်ကြယ်ပွင့်
Unicode ယူနိုက်တက်ကို ပြောင်းချင်လွန်းလို့ဘိုင်ယန်ကိုငြင်းပါယ်ခဲ့တဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ်ကြယ်ပွင့် ယူနိုက်တက် အသင်း ကတော့ အေဂျက် အသင်း ရဲ့ နောက် ခံ လူ တင်ဘာကို ခေါ်ယူနိုင် ဖို့ ရန်သေချာ သွားပြီ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျူလီယန် တင်ဘာ ဟာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ဒီရာသီ အဓိက ပစ်မှတ် တွေထဲ က တစ်ခု ဖြစ်ပေမယ့် လို့ ယခု အချိန်မှာ တော့ သတင်း သိပ် မထွက် သေး တာကို တွေ့ရပါတယ်။ လက်ရှိ အခါမှာတော့ တင်ဘာကို ဘိုင်ယန် မြူးနစ် အသင်း က ခေါ်ယူ ဖို့ ရန် […]
တန်းဟတ် ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ယူနိုက်တက် နဲ့ ဇာတ်လမ်း အဆုံးသတ်သွားတဲ့ ကြယ်ပွင့် ကစားသမား
Unicode . တန်းဟတ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ယူနိုက်တက် နဲ့ ဇာတ်လမ်းပြီးဆုံးသွားရတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ကြယ်ပွင့် အဲရစ် တန်းဟတ် ဟာ ယူနိုက်တက် ရဲ့ ညာတောင် ပံ ပြဿနာ အတွက် ၎င်းရဲ့ တပည့်ဖြစ်သူ အေဂျက် အသင်းမှ အန်တိုနီ ကို သာ ဆုံး ဖြတ် ခဲ့ တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘရာဇီးသား လိဒ်ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ ညာတောင်ပံ ကြယ်ပွင့် ရာဖင်ဟာ ကို လည်း ယူနိုက်တက် က အဲရစ် တန်း ဟတ် အတွက် ရွေးချယ်စရာ တစ်ခု အဖြစ် ပေး ခဲ့ ပေမယ့် တန်းဟတ် က ပါယ်ချ ခဲ့ ပြီး ၎င်းရဲ့ တပည့် အန်တိုနီကို […]
အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့မကြာခင် ယူနိုက်တက်ကို ရောက်လာနိုင်တဲ့ထိပ်တန်း ကြယ် ပွင့် ၅ ဦး
Unicode . အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့မကြာခင် ယူနိုက်တက်ကို ရောက်လာနိုင်တဲ့ထိပ်တန်း ကြယ် ပွင့် ၅ ဦး ပေါ်လိုဒိုင်ဘာလား- ဂျူဗင်တပ် အသင်း ကနေ ရာသီကုန် ထွက်ခွာမယ့် ဒိုင်ဘာလား ဟာ ယူနိုက်တက် အသင်း နဲ့ သတင်း တွေထွက်ပေါ် နေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရော်နယ်ဒို ရဲ့ အကူအညီ နဲ့ ဒိုင်ဘာလားတစ်ယောက် ယူနိုက်တက်ကို ပြောင်းလာလိမ့်မယ်လို့သတင်းကြီး နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲရစ်ဆင်- အဲရစ်ဆင် ကတော့ ဘရန့်ဖိုဒ့် မှာ ပြသနေတဲ့ ခြေစွမ်း တွေကြောင့် ယူနိုက်တက် နဲ့ သတင်းတွေထွက်နေသူ လို့ ဆို ရင်လည်း မမှားပါဖူး။ ကာမာရာ- မာဆေလ်း လူငယ်ကြယ်ပွင့် ကာမာရာ ကို […]